Iinkqubo Zokufudukela Kwabatyalomali-IiNkqubo zokuHlala kwakhona kunye nezoBumi
Ubummi ngotyalo-mali, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali kunye neGolden Visa
Ubummi / ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kuthengiso lwezindlu
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali Kunye namagqwetha ee Abemi boTyalo-mali kunye nabarhwebi beenkqubo zokuhlala izindlu nomhlaba basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo-mali, ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali, ukuhlala kwakhona okwesibini ngotyalo-mali, ukuhlala kubini ngotyalo-mali, ukuba ngummi kunye nokuhlala ngokutyala imali, ukuhlala isigxina ngotyalo-mali, ukuhlala okwethutyana ngotyalo-mali, ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali iskimu, ukuba ngumhlali ngezikimu zotyalo-mali, ubummi ngotyalo-mali, ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali, ubummi besibini ngotyalo-mali, ubumi bobabini ngotyalo-mali, indawo yokuhlala nobumi ngotyalo-mali, ukuhlala kunye nokuba ngummi ngotyalo-mali, iinkqubo zobumi boqoqosho, ubumi ngotyalo-mali Inkqubo, Ubummi ngezikimu zotyalo-mali, ipasipoti yesibini, iinkqubo zepasipoti yesibini, inkqubo yepasipoti yesibini, ipasipoti yesibini yesibini, ukuhlala kunye nepasipoti yesibini, ipaspoti yesibini yozakuzo, ipasipoti yesibini yotyalo-mali, ipasipoti yesibini yokuba ngummi, ipasipoti yesibini, izikimu zepasipoti yesibini, iivisa zegolide , iinkqubo zevisa zegolide, inkqubo yegosa yegolide, visa yesibini yegolide, inkqubo yesibini yegosa yegolide, visa yegolide, ubumi kunye nevisa yegolide, ukuhlala kunye nevisa yegolide, ubumi bevisa yegolide, inkqubo yevisa yegolide, izikimu zevisa zegolide.
"Izisombululo ezi-1 zokumisa" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala kunye nobumi ngokutyala imali ngenkxaso eyongezelelweyo.
Ngotyalo-mali oluncinci lobumi kunye nobumi
Amazwe adumileyo otyalo mali
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali
Inkxaso yabathengi kubuTyalo-mali ngotyalo-mali kunye nokuHlala kwakhona ngokuTyala
Iqela lethu Ubumi kunye nokuhlala Ngabenzeli botyalo mali kwaye ngoTyalo-mali Amagqwetha inika abathengi kunye neentsapho zabo ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali, ukuhlala ngokutyala kunye namanye amathuba otyalo mali, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali okanye kwiVisa yaseGolide okanye kubumi ngotyalo-mali okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda namathuba otyalo mali ngokuthengisa izindlu nomhlaba, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani okanye unxweme, izibonelelo zabasebenzi nokunye okuninzi, equka ukucwangciswa kwemali nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi nakwindawo yokuhlala yesibini.
INkxaso eKhethekileyo yokuHlala kwakhona ngoTyalo-mali kunye noBumi ngoTyalo-mali:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi ubummi ngotyalo-mali kunye nokuhlala kwiinkonzo zotyalo-mali, ngokokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena, abarhwebi abafudukela kwamanye amazwe abafikelelekayo, ubumi obufikelelekayo ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngabacebisi botyalo-mali, ubumi obufikelelekayo ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngamagqwetha otyalo-mali kunye nefemu yabacebisi abafudukayo.
Ubummi ngoTyalo-mali kunye nokuHlala kwakhona ngokuTyala kumazwe angama-48.
Visa yegolide kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini eya kumazwe angama-37.
Ukufudukela kwamashishini ngokuya kumazwe angama-106.
Ubummi ngeeNkqubo zokuTyala imali kunye nokuHlala kwakhona ngeeNkqubo.
Iinkqubo zevisa zegolide kumazwe angama-37.
Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali kumazwe angama-37.
Iipasipoti zesibini zokuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufudukela kweshishini kumazwe angama-106.
Ubumi obukhethekileyo ngoTyalo-mali kunye nokuHlala kwakhona ngeNkxaso yoTyalo-mali kubantu, amashishini kunye neentsapho kumaxabiso aphantsi.
Ubummi ngoTyalo-mali kunye nokuHlala kwakhona ngokuTyala imali ngokuTyala izindlu nomhlaba
Sibonelela ngenkxaso kutyalo-mali lokuthengiswa kwezindlu nomhlaba ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali, nanini na, xa efuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo lokuba ngabemi ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngokutyala. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa abathengisa izindlu nomhlaba abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezilungileyo, belanda eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwezindlu kunye notyalo mali kwizindlu nomhlaba.
Amazwe axhaswayo okuhlala ngokutyala kunye nobumi ngoTyalo mali
Yonke into ekufuneka uyazi-Ubumi ngoTyalo-mali kunye nokuHlala kwakhona ngokuTyala
Ubummi ngotyalo-mali kunye nokuhlala kutyalo-mali Igqwetha liya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu olunenkcukacha malunga nobumi bakho obuphumeleleyo ngotyalo-mali kunye nokuhlala kutyalo-mali. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zobummi ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngokutyala kubandakanya:
Ukufumana iingcebiso ngendawo yokuhlala ngoTyalo-mali, ubummi ngoTyalo-mali, iPasipoti yesiBini okanye iiVisa zeGolide
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka, ngokusekwe kwiziphakamiso eziza kwenziwa
Senza inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ngobumi ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngokutyala kubathengi ukufumana ubumi okanye ukuhlala kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo efanelekileyo, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ikhontrakthi yokuHlala kwakhona ngoTyalo mali, Ubumi ngoTyalo mali, iPasipoti yesiBini okanye iGolden Visa
Ukuze siqhubele phambili kubumi bakho ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngokufaka isicelo sotyalo-mali siya kufuna iikopi ezikhutshiweyo zepasipoti yomthengi kunye namalungu osapho.
Ukulungiswa kwamaxwebhu okuhlala kwakhona ngoTyalo mali, Ubumi ngoTyalo mali, iPasipoti yesiBini okanye iiVisa zeGolide.
Inguqulelo kunye ne-apostile yamaxwebhu obumi ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngokusetyenziswa kotyalo mali. Amagqwetha ethu akhethekileyo kubumi ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngokutyala kunye negolide visa iya kunceda ngokugcwalisa iifom kunye namaxwebhu.
U kufakwa yamaxwebhu okuhlala ngokuTyala, ukuba ngummi ngoTyalo mali, iPasipoti yesiBini okanye iiVisa zeGolide.
Nje ukuba amaxwebhu akho obumi nawosapho ukuba abe ngabemi ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngokufaka isicelo sotyalo-mali sele elungile, siya kuwuzalisa ngabasemagunyeni abafanelekileyo.
Ukuvunywa kokuhlala nguTyalo mali, Ubumi ngoTyalo mali, iPasipoti yesiBini okanye iiVisa zeGolide
Ubude bexesha:1 kwiinyanga ze-4
Ukwabelana ngeendaba ezimnandi zokuvunywa kobumi kwakhona ngoTyalo mali, Ubummi ngoTyalo mali, iPasipoti yesiBini okanye iiVisa zeGolide.
Sakuba samkelwe isicelo sakho sokuba ngummi ngotyalo-mali kunye nokuba ngumhlali ngotyalo-mali, sabelana nawe ngeendaba ezimnandi kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
ubummi ngotyalo-mali kunye nokuhlala kutyalo-mali nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngobumi obugqwesileyo ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngenkxaso yotyalo-mali kutyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu.
Ixhaswe ngabemi bamanye amazwe ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Ubummi bethu ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali zisinika elona xabiso lisezantsi, nezinga lempumelelo elingcono elinokufikelelwa.
Sithathe iminyaka yamava obumi bobabini ngotyalo-mali kunye nokuhlala abaxhasi abaxhasa kunye neentsapho zabo.
Ubummi obunamava ngokutyala kunye nokuhlala ngabaceli botyalo-mali kunye neearhente zomthetho ezibonelela ngenkxaso kubaxumi.
Sinezona solicitors zibalaseleyo kunye nenkqubo yokuphatha iiarhente kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Phambi kokuba ngummi wakho ngotyalo-mali kunye nokuhlala nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu
Sinamava aphesheya kubumi ngotyalo-mali kunye nokuhlala kutyalo-mali kubandakanya, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho ubummi bakho ngokutyala kunye nokuhlala kutyalo-mali kuyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zobummi ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngoTyalo-mali
Ukubala iindleko zobumi ngotyalo-mali kunye nokuhlala kutyalo-mali nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zobumi ngotyalo-mali kunye nokuhlala ngenkqubo yotyalo-mali kunye nezinye iindleko.
Asibuxhasi okanye sibunike ubummi ngotyalo-mali kunye neNdawo yokuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kubantu abathile okanye amashishini akhankanywe apha ngezantsi:
Ubummi ngotyalo-mali kunye neNdawo yokuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu.
Ubummi ngotyalo-mali kunye neNdawo yokuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali azinikezelwanga ukugadwa ngobuchwephesha okanye ubuntlola beVoIP.
Ubummi ngotyalo-mali kunye neNdawo yokuhlala ngokubonisana notyalo mali azinikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho.
Ubummi ngotyalo-mali kunye neNdawo yokuhlala ngenkxaso yotyalo-mali ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuzo.
Ubummi ngotyalo-mali kunye neNdawo yokuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali ayisiyoshishini elisebenza ngezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya.
Ubummi ngotyalomali kunye neNdawo yokuhlala ngokwenkqubo yotyalo mali Inkxaso ayifumaneki kubantu abasebenza kurhwebo, ukugcinwa, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oLuntu.
Ubummi ngotyalo-mali kunye neNdawo yokuhlala ngokutyala ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Ubummi ngotyalo-mali kunye neNdawo yokuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali ayizizo iinkolo zonqulo kunye noncedo lwabo.
Ubummi ngotyalo-mali kunye neNdawo yokuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali ayibonelelwa ngabantu abajongana neMifanekiso engamanyala.
Ubumi bethu ngotyalo-mali kunye neNdawo yokuhlala ngokutyala amagqwetha abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okhuseleko afanelekileyo ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubaxumi kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni ukwamkelwa kwesicelo Ubummi ngotyalo-mali kunye neNdawo yokuhlala ngokutyala ngotyalo-mali.
Iintlobo ze ivisa
Inkqubo yemvume yokusebenza
Indawo yokuhlala esisigxina
Oonozakuzaku kunye nabameli
Nceda ndwendwela Iphepha lokufuduka
Ubumi / Indawo yokuhlala ngoTyalo-mali kunye nezinye iiNkonzo
Sibhale uluhlu lweenkonzo ezimbalwa esizibonelelayo ukulungiselela iimfuno ezikhawulezileyo okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukuhamba nosapho lwakho ngokutyala, thina njengeqabane lakho, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo kumaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kobummi ngokubonisana notyalo mali, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nazo, ongenakufumana phantsi kwesinye isambrela esinikezwe ngabaphi na abanye abacebisi abasenza ivenkile yokumisa kwindawo enye kumazwe ayi-107.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye noosomashishini ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yethu yokufikelela kubumi ngotyalo-mali ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nabazibophelelayo nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani zitshiphu kuthi.)
Nawuphi na umtyalomali ofudukayo uya kufuna iakhawunti yebhanki yakho kunye neakhawunti yebhanki yenkampani, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Ngaba ufuna ukubonisana, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech okanye izisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuba ngummi ngotyalo-mali ukuba ucwangcisa uku qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho ukuqala kwangoko.
yethu inkampani yezabasebenzi inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba zengqesho free.
Iinkqubo zefowuni yeshishini kunye amanani abonakalayo Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali
Accounting, ukukhuthala ngenxa kunye okuninzi kakhulu.
Emva kokuhlala ngokutyala, ukuseta ishishini.
Sinikezela ngezisombululo ze-IT ezichazwe ngezantsi
Uphuhliso lwezorhwebo kwi
Amagqwetha obuBumi / abahlali ngokuTyala
Sibonelela ngobumi bobuMthetho ngezisombululo zotyalo-mali kunye nempumelelo kubaxumi bethu kubaluleke kakhulu ,, siziinkokeli, inkampani yethu yezomthetho ineearhente ezigqwesileyo zokufudukela kwelinye ilizwe, sinedumela lokuhambisa awona mava asemagqabini okulungiselela abathengi ngezisombululo ezicacileyo zotyalo-mali abantu kunye neentsapho zabo. Ubumi bethu liqela lotyalo-mali libonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yoMthengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala, kwimvume yakho yokuhlala yamkelwe.
Amandla egqwetha ayafuneka kuwo onke amatyala asemthethweni egameni lakho ngoBumi ngabaceli botyalo mali. Ukuba ukhona okanye uceba ukutyelela, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani ukude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuze asetyenziswe kuloo mmandla. Kuxhomekeke kwilizwe ohlala kulo, kufanele ukuba ukhubeke okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli.
Imibuzo Ebuzwa Rhoqo - Ubumi / Indawo yokuhlala ngoTyalo mali
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala imali?
Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala ngotyalo-mali kuqoqosho ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Indawo yokuhlala ngamagqwetha otyalo-mali, indawo yokuhlala efanelekileyo ngamagqwetha otyalo-mali kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo-mali, ukusebenza kwindawo yokuhlala efanelekileyo ngabameli botyalo-mali, kunye neefemu ezigqwesileyo zabaphambukeli.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali | Ukuhlala kwakhona ngabameli botyalo mali | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo-mali
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngotyalo-mali?
Ubummi ngotyalo-mali, bunokuchazwa njengokufumana ubummi ngotyalo-mali kuqoqosho ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. ubummi ngamagqwetha otyalo-mali, ubumi obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali kunye nobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali, ukusebenza ngobona bumi bugqwesileyo ziiarhente zotyalo-mali, kunye neefemu ezigqwesileyo zokungena.
Iinkonzo zongenelelo kubatyali mali ezifikelelekayo | Abaceli abafudukayo abangenakufikeleleka | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha okungena | Abatyali mali abafikelelekayo kubaphambukeli | Iifemu zomthetho wofikelelo ezifikelelekayo
Ithini inkcazo yepaspoti yesibini?
Ipasipoti yesibini, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni ngokutyala imali kuqoqosho ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. , Amagqwetha esibini esona sepasipoti kunye nabona baphumeleleyo besibini beepaspoti, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela zesibini, kunye neefemu zokubonelela ngokufuduka.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini | Iiarhente zokundwendwela zesibini | Amagqwetha esibini epasipoti | Igqwetha lesibini lokundwendwela | Abacebisi bencwadana yokundwendwela yesibini
Iyintoni inkcazo yevisa yegolide?
IVisa yegolide, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala kutyalo-mali kuqoqosho ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, ukuthengisa izindlu nomhlaba, njl. , Amagqwetha egosa aphezulu egolide kunye nabacebisi begosa abagqwesileyo begolide, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide, kunye neefemu zokubonelela ngokufuduka.
Iinkonzo zevisa ezimnandi | Iiarhente zevisa ezimnandi | Amagqwetha egosa egolide | Amagqwetha egosa egolide | Abacebisi ngevisa zegolide
Leliphi elona xesha lincinci lotyalo-mali kubumi / ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali?
Ubuncinci botyalo-mali kubumi ngotyalo-mali.
Ngaba unika inkxaso yezomthetho yobumi / yokuhlala ngokutyala?
Ewe, igqwetha lethu kunye neearhente zibonelela ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali.
Ngaba ubummi / ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali kuyabiza?
Iindleko zoBumi boTyalo-mali kunye nokuHlala kwakhona ngokweemfuno zengxowa mali yotyalo-mali yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngobumi ngoTyalo-mali, sikwabonelela ngezinye izinto ezininzi zokuxhasa ukuhlala kwakhona ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sokuba ngummi wotyalo-mali okanye i-visa yotyalo-mali?
Ubummi beenkonzo zotyalo-mali ezinokuthi zisetyenziswe ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa bubummi ngotyalo-mali oluvela e-Asiya, Ubumi ngotyalo-mali oluvela e-Afrika, Ubumi ngotyalo-mali oluvela eYurophu, Ubumi ngotyalo-mali oluvela eMzantsi Melika, Ubumi ngotyalo-mali oluvela eMalaysia, Indawo yokuhlala ngo Utyalo-mali oluvela e-Bangladesh, Ubummi ngotyalo-mali oluvela e-Indonesia, Ubummi ngotyalo-mali oluvela e-Sri Lanka, Ubummi ngotyalo-mali oluvela eNepal, Ubumi ngotyalo-mali oluvela e-India kunye no Bumi ngotyalo-mali oluvela e-UAE.
Ubumi bobuGcisa / ukuhlala kwakhona ngesiKhokelo kuTyalo mali
Cela ukubonisana simahla kubumi bakho / ukuhlala kwakho ngoTyalo mali
Amagama abalulekileyo kwi-Business Immigration
Ukufudukela kwabatyali mali Amazwe e-48!